Hery Rajaonarimampianina : Laharam-pahamehany ny famonjena vahoaka -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Laharam-pahamehany ny famonjena vahoaka
Anisan’ny nitondra takaitra mafy nandritra ny fandalovan’ilay rivodoza Eliakim ny faritra avaratry ny nosy iny, maro noho izany ireo rava trano sy traboina vokatr’izany. Tsy niandry ela rahateo ny fitondram-panjakana izay notarihin’ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampianina, nijery sy nitondra fanampiana ho an’ireo mpiaray tanindrazana tany an-toerana. Nandritra izany fitsidihana izay nosantarin’ny filoha tao amin’ny tanànan’Ambilobe no nametrahan’ny filoha ny fahatokisana avy amin’ireo vahoaka. Nambaran’ ny filoham-pirenena tamin’ izany fa « amin’ny zava-mitranga manahirana tahaka izao tokoa no ahitana ny tena namana ». Amin’ ny fomba malagasy tokoa dia ny fotoana mafy tahaka izao no ilana fifanampiana , ary amin’ny alalan’ izay fihavanana izay tokoa no nahatongavan’ny Filoha malagasy tany an-toerana. Ankehitriny tokoa mantsy dia maro ireo mpanao politika izay manao ireo izay manana takaitra sy fahoriana ho fitaovana, izay tsy tonga manantona raha tsy misy ny tombontsoan’izy ireo. Amin’ ny fotoana famonjena ny malagasy noho ny voina mahazo azy tahaka izao kosa dia tsy hita ireo mpanao politika ireo.
Tsy tahaka izany anefa ny filoham-pirenena malagasy Hery Rajaonarimampinina , satria ho azy dia laharam-pahamehana ny famonjena ny malagasy tsirairay izay tratry ny voina tahaka izao, nambarany ohatra nandritra ity fitsidihana tany Ambilobe ity fa ny fitondram-panjakana dia mijery akaiky ny fahavoazana izay nihatra tamin’ ny mpiray tanindrazana « satria adidiko amin’ ny maha filoham-pirenena ahy ny miahy anareo, dia tiako ny manamarika etoana fa hanao izay tratry ny heriko ao amin’ny hanohanana sy hitondra fanampiana, ary indrindra ny hanatsara ny toe-piainan’ny vahoaka malagasy amin’ny ankapobeny » hoy hatrany ny filoha malagasy . Nandritra ny fitsidihan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ireo faritra sy toerana izay nolalovan’ny rivodoza, dia nampiseho filamatra ho an’ny mpanao politika ny tenany. Amin’ izao tokoa mantsy dia tsy ilaina intsony ny kabary ambony vavahady, satria mila asa mivaingana tahaka ny nataon’ ny filoha ity ny malagasy. Midika izao fa zava- dehibe amin’ny filoham-pirenena tokoa ny famonjena ny malagasy mpiray tanindrazana aminy, satria tokoa dia tokony namonjy ny fivoriana tsy ara-potoana any Kigali ny tenany, saingy najanona izany amin’ ny maha laharam-pahamehana ny vahoaka malagasy.
Araka ny tetiandrom-pifidianana dia anio no hanomboka ny fampielezan-kevitra ho an’ ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa, tsy hitsahatra izany raha tsy ny faha-17 ny volana desambra izao. Hiavaka ny fanokafana izany ho an’ny kandidà laharana ...Tohiny